Global Voices teny Malagasy » Filipina: Mahatsiaro ny vono olona tany Maguindanao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Desambra 2019 4:17 GMT 1	 · Mpanoratra Karlo Mongaya Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Sary mampihoro-koditra maro no miparitaka amin'ny aterineto. Mampibaribary ilay tranga manafintohina ireo bilaogy sy tambajotra sosialy Filipiana .
Mampifandray  ny Fandripahana Maguindanao ny Critic After mba haka sarimihetsika ao anaty fifanakalozan-dresaka ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tohanan'ny fanjakana sy ny herisetra ara-politika mpiseho mahazatra amin'ny sarimihetsika Filipiana.
The Village Idiot Savant kosa mihevitra  fa tsy tokony ho raisina toy ny lasibatra fotsiny ireo lasibatra tamin'ny fandripahana.
Tahaka izany koa, lasa lohahevitra hihetsehana fanoherana sy araka ny tarazo ilay vono olona. The Vera Files mitatitra  fa iray amin'ireo songadina tamin'ny Diaben'ny Arendrina fanao isan-taona tao amin'ny Oniversiten'ny Philipines Diliman tamin'ny volana Desambra lasa teo ny andiam-piara mampiseho ny vono olona .
Mandritra izany fotoana izany, High Chair, gazety tononkalo any Filipina mangataka tononkalo  havoaka amin'ny andiany faha-12 ka mampisongadina ny “Fandripahana tao Maguindanao”.
Nanambara lalàna miaramila  tao amin'ny faritany Maguindanao nandritra ny herinandro tamin'ny volana lasa teo ny governemanta Arroyo, izay noheverina fa hanenjika an-dry Ampatuan sy ny tafiny manokana. Na izany aza, mbola ho hita eo ihany raha hiakatra fitsarana ireo nahavanon-doza na tsia.
Ho an'i Tonyo Cruz , toa nampiasain'ny governemanta Arroyo ny fanambaràna vao haingana momba ny lalàna miaramila mba hamelana ireo nahavanon-doza tamin'ny famonoana olona tsy ho tratran'ny lalàna.
Amin'izany fomba izany dia mangataka ny hanehoan'ny (hafa) hevitra  momba ny Famonoana tao Maguindanao i Marianna Gurtovnik ao amin'ny The Mantle:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/26/146055/
 Sary mampihoro-koditra maro no miparitaka amin'ny aterineto. Mampibaribary ilay tranga manafintohina ireo bilaogy sy tambajotra sosialy Filipiana: http://images.google.com.ph/images?q=maguindanao%20massacre&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=en&tab=wi
 mangataka tononkalo: http://unholyhours.blogspot.com/2009/12/high-chair-and-maguindanao-massacre.html
 Nanambara lalàna miaramila: https://globalvoicesonline.org/2009/12/10/philippines-bloggers-raise-voices-against-martial-law/
 mangataka ny hanehoan'ny (hafa) hevitra: http://www.mantlethought.org/content/qa-november-2009-political-massacre-philippines